Big ငွေ Slingo အပိုဆု |
သငျသညျအခြေခံအားဖြင့် slot နှစ်ခုနှင့်ဘင်ဂိုကစားပေါင်းစပ်နေသော Slingo ဂိမ်းတစ်ခုပန်ကာဖြစ်လျှင်, ထို့နောက် Big ငွေ Slingo အပိုဆုကျိန်းသေတစ်ဦးပါထိုက်သည်. တဦးတည်းမရှိပါပေမယ့်6သင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာနေရာများ. သင်ကဒီဂိမ်းကိုစတင်ရှေ့၌သင်တို့ရွေးသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုရှေးခယျြနိုငျ. သင်တစ်ဦးမှတက်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ရှိရာကဒီ Slingo ၏အနိုင်ရတဲ့အလားအလာကြီးမားဖြစ်ပါသည် £ 250,000 ထီပေါက်. ဒီအနိုင်ရနိုင်ရန်အတွက် £ 250,000 ထီပေါက်, သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိုင်းများအများဆုံးအရေအတွက်ကဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာဒီဇိုင်းနှင့်တီထွင် IWG ဂိမ်းဆော့ဖျဝဲ developer များအားဖြင့်၎င်း, သူတို့ကဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအချို့သောတကယ်အံ့သြဖွယ်အလုပ်နှင့်ဂိမ်းပွုပါပွီထားပြီး.
Big ငွေ Slingo Play နှင့်£ 250,000 ထီပေါက်အနိုင်ရ
ဤသည် Slingo ရုံတစျခုတစျမြိုးဖွစျသညျ. ရုံဂိမ်းရဲ့ start မှာ, သင့်ထံမှကစားရန်ခြောက်တည်နေရာအကြားရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောနေကြတယ်. အဆိုပါနေရာများတွင် Joker Hamlet များမှာ, ရွှေ Fields, တော်ဝင်သစ်တော, မှောင်ခို Cove, စိန် Peak နှင့် Lucky Gulch. ဤတည်နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် Joker ရဲ့ Hamlet များအတွက် 50p သကဲ့သို့အနိမ့်ရာမှစတင်သည်နှင့် Lucky Gulch များအတွက်£ 15 ရောက်ရှိမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်. ဤတည်နေရာတစ်ခုချင်းစီ၏ဂိမ်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ဆုကိုငွေကြေးနှင့်ဂိမ်း၏ interface ကိုဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးဖမ်းပြီးရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် £ 250,000 ထီပေါက် ဒီဂိမ်းရဲ့အဆုံးအားဖြင့်.
Big ငွေ Slingo အပိုဆု Gameplay
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းများ၏ဂိမ်းကအရမ်းရိုးရှင်း. အဖြစ်မကြာမီကစတင်သည်အဖြစ်, သငျသညျပေးထားပါလိမ့်မည်6သငျသညျမှာကစားလိုသောနေရာများကို options များ. သငျသညျခွောကျရှေးခယျြစရာတစျခုကို select ပြီးနောက်, သငျသညျအဓိကမျက်နှာပြင်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုလောင်းပေး6spins နှင့်သင်ရုံလိုင်းများအများဆုံးအရေအတွက်ကလုပ်ရန်ရှိသည်. သငျသညျယခုစတင် button ကို click ရန်ရှိသည်များနှင့်အထိ4Joker သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်. တစ်ခုချင်းစီကိုလှည့်ဖျားတဲ့နံပါတ်သို့မဟုတ်အခမဲ့လှည့်ဖျားထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်တစ်ခုခု. အဆိုပါဂိမ်းရဲ့ start မှာထည့်သွင်းခဲ့ကြသော Joker ကြောင်း box ကိုသိမ်းပိုက်မည်ကိုသင် table ထဲမှာသူတို့ကိုပယ် mark ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်. တစ်ခုချင်းစီကိုလိုင်းသင်သည်ထိုလိုင်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရနိုင်သည်ကိုငွေသားပမာဏကိုဖေါ်ပြခြင်းက၎င်း၏ဦးခေါင်းမှာမြှားရပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးကဲ့သို့ကြီးမားသောအနိုင်ရနိုင်ပါတယ် £ 250,000 ထီပေါက် ဤအလိုင်းများပြီးသွားသဖြင့်.
Slingo အချို့တကယ်အံ့သြဖွယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်. ဤသည်သိသာထင်ရှားစွာပင်ကြီးမားနဲ့လူစုလူဝေးကိုနူးဖြစ်ပါသည် £ 250,000 ထီပေါက် ကာလွယ်ကူသောဂိမ်း. သင်တစ်ဦးဘင်ဂိုကစားသို့မဟုတ်တစ် slot ကပန်ကာလျှင်သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်ဤသူကစားပျော်စရာတွေအများကြီးရှိသည်သွားကြသည်.